Ukuvakasha okungu-5 eduzane naseFlorence | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Ukuphunyuka eYurophu, Florencia, Italia
IFlorence yindawo efunwa kakhulu, njengoba kungumuzi othokomele wase-Italy lapho ungabona khona imisebenzi emihle yobuciko nendawo enhle endala. Kepha ngale kwaleli dolobha, kunezindawo ezithakazelisa kakhulu esingazicabangela. Uma sinezinsuku ezimbalwa singazisebenzisa ezinye zazo ukubona amadolobha aseduze, ngoba IFlorence yidolobha elincane amaphuzu wabo wezintshisekelo avakashelwa ngokushesha.
Leli dolobha liyathakazelisa, kepha sithola eduze kwalo amakhona amnandi eTuscany noma izindawo ezisogwini ezingasusa umoya. Ngakho-ke akumele simoshe lolu hambo sisondele kulezi zindawo ezincane eziseduze, ngoba zizotholakala.
3 I-Cinque Terre
5 ISan Gimignano
Ngubani ongayazi i- umbhoshongo wePisa? Leli dolobha elincane eliyitheku lisendaweni yaseTuscany, futhi liyidolobha elincane kakhulu, elingavakashelwa ngosuku olulodwa, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi iningi lezivakashi lifuna ukuthatha isithombe esihlekisayo eMbhoshongweni wasePisa. Kule ndawo enhle kakhulu asitholi nje kuphela umbhoshongo, osudume ngokuncika kancane kancane ngoba uyavuma. Siphinde sibe neDuomo neBaptistery. Kuyinkimbinkimbi enhle kakhulu yobuhle obukhulu, eyenziwe ngesitayela abayibize ngokuthi iPisan, kepha ekhuthazwe yiRomanesque. Edolobheni elifanayo kunamanye amasonto alingisa lesi sitayela esihlukile, njengeSanta Chiara noma iSanta Cristina. Idolobha elincane kangangoba singalivakashela ngamatshe esikhumbuzo alo ngosuku olulodwa, futhi lisendaweni engamakhilomitha angama-85 ukusuka edolobheni laseFlorence, ngakho-ke ngeke kuthathe isikhathi eside ukufika lapho.
Leli elinye idolobha eliqhele ngamakhilomitha angama-70 ukusuka eFlorence futhi elinomlando omningi nemigwaqo emihle nezikhumbuzo. Kwakhe isikhungo somlando Kumenyezelwe njengendawo eyiGugu Lomhlaba. IPiazza del Campo iyisikwele esiphakathi nendawo, futhi esinye sezikwele zasendulo ezigcinwe kahle eYurophu, lapho singabona khona ukunyakaza okuningi njalo. Lesi sikwele mhlawumbe usijwayele, ngoba iPalio de Siena edumile ibanjelwe lapha, umjaho wamahhashi obheke ezifundeni zedolobha.
La ICathhedral noma iDuomo yaseSiena Futhi kuyisakhiwo sobuhle obukhulu esivela ngekhulu le-XNUMX, yize ukwakhiwa kwaqhubeka eminyakeni eyalandela. Kuwo awukwazi ukuphuthelwa umqansa wokubuka ukuze ube nemibono emihle yedolobha. Uma ukhathele yizikhumbuzo eziningi kangaka futhi ufuna ukuyothenga, ungaya eVia Bianchi di Sopra, umgwaqo ohweba futhi oheha kakhulu.
ICinque Terre akulona idolobha noma idolobha, kepha kuphelele indawo esogwini lapho sithola amadolobha amancane amahlanu emaweni futhi sibheke olwandle. Lokhu kuvakasha kuyinjabulo yezinzwa, njengoba amakhadi eposi eCinque Terre kunzima ukukhohlwa. Izindawo zokudoba manje seziheha kakhulu, esingazifinyelela ngesikebhe noma ngemigwaqo emazombezombe. Emaweni sizobona izindlu ezimibalabala, ezijabule futhi ezitelekayo, futhi singalahleka emigwaqweni emincane yale madolobha akhethekile. Lawa ngamadolobha amahlanu atholakala endaweni engamakhilomitha ayi-18 ogwini, iMonterosso, iVernazza, iCorniglia, iManarola neRiomaggiore. Ngaphandle kokungabaza, kuwukuphumula okuvela emadolobheni agcwele abantu, ngoba amadolobha amancane asogwini esingavakashela kuwo ngokuthula.
Uma uyithandile i-movie 'Ngaphansi kwelanga LaseTuscan', Uzokwazi ukukhumbula izikhathi ezihamba phambili zomuntu oyinhloko edolobheni laseCortona, ngoba bekuyisimo esikhethiwe ukumela idolobha elijwayelekile elithule maphakathi neTuscany. Futhi ngokungangabazeki yakhethwa kahle, ngoba lokhu yikho kanye esizokuthola lapho sifika eCortona. Idolobha lasendulo elisungulwe ngabase-Etruria, lapho kugcinwa khona amasonto amadala nemigwaqo emincane. Ungenza ukuvakashelwa okufushane kwesigamu sezinsuku, ikakhulukazi njengendawo oya kuyo lapho ungajabulela ukuthula okuyiqiniso kweTuscany. Njengokuvakasha, singaya kwezinye izindawo ezithakazelisayo njengeHermitage of Cells noma iPalazzo Comunale.
Idolobha laseSan Gimignano liyaziwa kahle endaweni yaseTuscan imibhoshongo eyishumi nane yangenkathi ephakathi, lapho kuzofanele sengeze ezinye ezingama-58 ezazikhona esikhathini esedlule, futhi ezakhiwa ngenhloso yokukhombisa amandla emindeni enamandla kakhulu. Namuhla sekuyiGugu Lomhlaba, kanye nedolobha elincane lasendulo lapho singakujabulela ukuhamba emigwaqweni yakudala. Leli dolobha lisendaweni engamakhilomitha angama-60 ukusuka eFlorence, futhi sisendleleni ebheke eSiena, ngakho-ke singama kancane lapho ukuze sijabulele izakhiwo ezindala nezikwele ezithulile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » Ukuvakasha okungu-5 eduze kwaseFlorence
UVicente Esteban kusho
UFlorence yize emncane uqukethe u-60% wobuciko be-Renaissance emhlabeni wonke, awubonakali ngaso leso sikhathi. Ngingangeza iFiesole, i-Arezzo, i-Lucca, i-Asisi, i-Vinci, i-Castiglioncello, i-Viareggio, i-Forte dei Marmi ne-Island of Elba. Eqinisweni, ePisa kukhona kuphela uMbhoshongo njengendawo yokuthakazelisa futhi ikakhulukazi indlu kaGalileo. Ngokuqinisekile okulandelayo kuzoba ngcono kuwe!
Phendula uVicente esteban